Naqshad Cilmi-baaris ah waxa Fasiraadda Webka
adoo isticmaalaya qalab loo yaqaan 'scrapbook' bogga . Xogta la soo saarey waxaa lagu keydsan karaa galka loo yaqaan ama meel kale. Waxa kale oo lagu kaydin karaa xogta miiska ama miisaanka xisaabta.
Macluumaadka shabakadaha badankooda waxaa lagu arki karaa oo kaliya iyadoo la adeegsanayo barta internetka. Nooga badbaadin kartid nuqul isticmaalkaaga shakhsiga ah. Xulashadaada keliya ayaa ah inaad nuqul ka sameyso maadada oo aad meel kale ku dhejiso. Marka laga reebo inaad noqoto mid caqli gal ah oo niyadjab leh, sidoo kale waqti ayay qaadataa. Bal qiyaas in aad leedahay nuqul ka kooban dhamaanba bogga 200 bogsiisay. Waxay qaadan doontaa waqti aad u weyn!
Si kastaba ha ahaatee, xoqitaanka webku waa habka isdifaaci kara hannaankan. Bedelkii kumbuyuutarka, nuqulka bogga ama shabakada bogga ayaa shaqada ku qaban doona waqti gaaban. Waxay kaa badbaadin doontaa xanuun badan, dadaal iyo waqti.
Sababo la xiriira xaqiiqda ah in kharashka nukliyeerka ee dhismaha uu yahay mid aad u sarreeya, dad badan ayaa doorbidaya inay tagaan barnaamijka shabakada korantada ee shabakada, hase yeeshee, kuwaasi waxay leeyihiin cillado sidoo kale waa ay adagtahay in la dejiyo oo la isticmaalo
Tani waa halka ay WebHarvy soo saartay, waxaana loo sameeyey si ay ula qabsadaan dhibaatooyinka dhacaya marka la isticmaalo boodhadhka ugu caansan. wuxuu bixiyaa dareen macquul ah, dhibic iyo guji ace Iyadoo WebHarvy, ka saarista xogta website kasta waa arrin dhowr daqiiqo ah.
Qalabka wuxuu ku yimaadaa cajalad fiidiyoow ah oo muujinaya sida ay u fududahay in loo dhiso oo loo isticmaalo baahidaada saarida xogtaada. Kadib ka dib daawashada fiidiyowga, waxaad baran doontaa sida fudud ee dhibcaha iyo guji dhexdhexaadintu. Waxa runtii u taagan yahay qalabkan waa xaqiiqda ah in aysan u baahnayn wax codsi ah oo lagu rakibayo. Waxaa loo qaabeyn karaa si loo xoqo xogta laga helo bogga internetka oo leh dhawr jeer oo ah jadwalkaaga. Si aad u dooratid xogta la xoqay, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad u sheegto mawdukaaga macluumaadka xogta. Si aad u qiimeyso, waxaad isku dayi kartaa qaabka qiimeynta, waxaad kaloo daawan kartaa bandhigga fiidiyaha Source .
Sababaha aad isku daydid WebHarvy:
Isku duubnaanta xogta guud, waa ka raqiisan tahay kuwa la dhisay
Uma baahna lambar ku saabsan dejinta iyo isticmaalka ( 33)
Way fududahay in la isticmaalo xitaa adeegsade aan farsamo ahayn
Waxay la socotaa qaabka qiimeynta iyo demo fiidiyoow